यो प्रियजनहरूलाई साथ सँगै प्राप्त गर्न समय, र यो एक अतिरिक्त उत्पादन हो किनभने रूस मा, यो बिदा को धेरै रुचाउनु छ। को धेरै रुचाउनु। तर सधैं वास्तवमा मना के थाहा छैन? उदाहरणका लागि, डिसेम्बर 12 रूस मा एक छुट्टी? गरेको छानबिन गरौं।
डिसेम्बर 12, नियुक्त संविधान दिन। यस मिति पाठ्यक्रम, आकस्मिक छैन। लोकप्रिय मत एक मास्टर कागजात अधिकार र रूसी नागरिक स्वतन्त्रता सुरक्षा द्वारा 1993 मा यो धेरै दिन मा, यो अपनाए थियो। 1994 मा, यो दिन को एउटा सरकारी कागजात एक रूपमा स्वीकृत राष्ट्रिय छुट्टी।
त्यसैले, प्रश्न गर्न सही उत्तर: "डिसेम्बर 12 - रूस मा एक छुट्टी", हुनेछ - संविधान दिन।
यो कागजात रूस एक लोकतान्त्रिक राज्य हो भन्ने तथ्यलाई स्थापित जो मूल्य र आदर मानव अधिकार र स्वतन्त्रता मा।
मुख्य कागजात 20 वर्ष पुरानो छ जब (यो 2013 मा भयो) दिन मा, रूसी संघ को अध्यक्ष वृद्ध, महिला, राखेका वा पहिले नै, गैर-हिंस्रक अपराधहरू गरेका क्षमादान मौका प्रदान बच्चाहरु छन् भनेर घोषणा।
संविधान दिन मात्र होइन रूसी संघ मा अवस्थित छ। यसलाई जहाँ यो एउटा महत्त्वपूर्ण कागजात वैध छ सबै देशहरूमा मनाइन्छ। अमेरिकी, ताजिकिस्तान, युक्रेन, Uruguay र जापान, यो Andorra, आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारुस, डेनमार्क, काजकस्तान, उत्तर कोरिया, नर्वे, पनामा, को सेचिलिस मा मनाउन।
जापान मा, मा तपाईंले भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ संसद हाउस यो दिन, देश राज्य लागि कागजात महत्त्व बारेमा व्याख्यान संगठित।
रूसी संघ मा पनि, यसको संविधान दिन छ। आफ्नो Bashkortostan, Dagestan, Kalmykia, Tatarstan र Chuvashia मनाउन।
के पहिले भयो?
अर्को प्रश्न: संविधान छ गर्नुभयो हाम्रो देशमा के पहिले छैन? थियो, मात्र यो थियो को सोभियत संघ को संविधान। पहिलो संस्करण 1936 मा अपनाए थियो, यो डिसेम्बर5मा स्थान लियो। र यो दिन 1977 सम्म उत्सव थियो।
त्यसपछि, अक्टोबर7मा नयाँ कागजात "समाजवाद संविधान विकसित" भनिन्थ्यो जो अपनाए थियो, र उत्सव अर्को मिति सौतेली थियो। स्थिति पनि सोभियत समयमा छ मना को परम्परा र रूसी संघ मा जारी गर्ने निर्णय गरे।
12 डिसेम्बर - रूस मा छुट्टी। आराम वा छैन?
1994 मा, यो दिन उपयुक्त कागजात एक उत्पादन रूपमा सेट गरिएको छ थियो। र त यो डिसेम्बर 2004 सम्म, देश को छुट्टी पात्रोमा महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू जो श्रम कोड, मा संशोधन गरिएको छैन, तब सम्म थियो। 2005 देखि, डिसेम्बर 12 (रूस मा छुट्टी) एक दिन अब उपलब्ध छ। यो बरु, उत्सव र अविस्मरणीय दिन छैन। पूर्व सोभियत संघ को धेरै देशहरूमा, यो दिन उत्पादन हुने, उदाहरणका लागि, संयुक्त राज्य अमेरिका एक सार्वजनिक छुट्टी छैन मा जारी, र।
sociologists अनुसार, वास्तवमा यो सप्ताह को उन्मूलनको नकारात्मक सार्वजनिक धारणा प्रभावित छ। रूसी नागरिक आधा भन्दा पनि कम संविधान वास्तवमा तिनीहरूलाई रक्षा गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास गर्छन्।
यो कागजात देश को लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यति भनेर यो प्रश्न पनि स्कूलमा अध्ययन गरिएको छ। र 1994 मा जारी राष्ट्रपति उर्दीले, यो विचार पुष्टि गर्छ। रूस मा एक छुट्टी - डिसेम्बर 12: र, को पाठ्यक्रम, बच्चाहरु प्रश्नको जवाफ जान्नु आवश्यक?
संविधान - एक जटिल र लामो कागजात छ। मुख्य कागजात आदर, राज्य र सामान्य मा व्यवस्था आदर सुरु हुन्छ।
म किन यो अध्ययन गर्न आवश्यक छ? संविधान ज्ञान सम्भव लागि स्थायी रूपमा देश महसूस मा रहछन प्रत्येक व्यक्ति राज्य मात्र होइन कर्तव्य, तर पनि व्यवस्था छ जो एक नागरिक, छैन अरू कसैको छ बनाउँछ।
एक हात मा, संविधान सरकार को permissiveness देखि नागरिक सुरक्षा। कागजात प्रासंगिक खण्डहरू गतिविधिहरु को स्कोप मात्र राष्ट्रपति छैन परिभाषित, तर पनि संसद, सरकार। शक्ति यस कागजातमा संकेत छ के सीमित छ, र थप विस्तार गर्न सक्दैन।
अर्कोतर्फ, संविधान बुझेका र देश को हरेक नागरिक को अधिकार र स्वतन्त्रता सुरक्षित राख्दछ। क्रममा मान्छे यस सम्झना गर्न सक्षम लागि, र धेरै थप दिन बन्द भन्दा अधिक थियो लागि हुन प्रयोग जुन रूस मा डिसेम्बर 12 मा एक छुट्टी, स्थापित, र अब unnoticed जान्छ टेलिभिजन वा रेडियो यसलाई स्मरण गराउन गर्दैन मा यदि गर्छ।
मात्र छैन केही अधिकार छ, तर पनि यी अधिकार सम्मान छन् ग्यारेन्टी अर्थ - एक नागरिक हुन। वारेन्टी व्यक्ति राज्य दिन्छ। - रूस मा एक छुट्टी डिसेम्बर 12: अब तपाईं प्रश्नको जवाफ थाहा?
23 फरवरी टवेल, वा कसरी मानिसलाई एक मूल उपहार बनाउने?
Meropiryatiya परिदृश्य: स्कूल को 50 वर्ष Jubilee। स्कूल वार्षिकोत्सव गर्न बधाई
इन्टरनेटमा दुई कम्प्युटरहरू कसरी जडान गर्ने?
कसरी एक स्नेहक चयन गर्न: प्रसब पछि सेक्स
अमेरिकी सैन्य हेलिकप्टर। नाम, वर्णन र विनिर्देशों
"Cyanocobalamin" लागूपदार्थको। प्रयोगको लागि निर्देशन
Curettage - यो के हो? Curettage: समीक्षा
हामी घर मा छोटो कपाल लागि Hairstyles के